Ungalivimba kanjani ikati lami ekuhambeni ekhaya | Amakati kaNoti
Ungalivimbela kanjani ikati lami ukuthi lingashiyi ikhaya
UMaria Jose Roldan | | Curiosities
Ungayivimba kanjani ikati lami ekuhambeni ekhaya? Lowo ngumbuzo thina sonke esiphila nesisulu esizibuze wona ngezikhathi ezithile. Futhi ukuthi, noma ngabe sizinikezela isikhathi esingakanani kuye, noma ngabe simnika uthando olungakanani, ilukuluku azizwa ngalo lizomqhuba ukuthi aphume ngomnyango ngokushesha nje lapho esethole ithuba, akunjalo?
Yebo, iqiniso ukuthi kuya ngokuthi. Empeleni yebo Singenza izinto eziningi ukwenza uboya buzizwe bukhululeke ngaphakathi endlini ukuthi ngeke babe nesidingo esinamandla sokuphuma ngaphandle, ngakho-ke kuzoba lula ukuyilawula. Awukholwa kimi? Qhubeka ufunde, faka lawa macebiso esivivinyweni uzobona ukuthi uzoqala nini ukubona izinguquko ebusheni bakho.
1 Ungenza kanjani ukuthi ikati lakho lingafuni ukuphuma endlini
1.3 Mnike konke akudingayo
1.4 Chitha isikhathi sekhwalithi nekati lakho
1.5 Lala naye
1.6 Mnikeze umlingani
1.7 Vikela ikati lakho
2 Ungashiya ikati lakho lide kangakanani?
3 Yini okufanele uyenze uma uya eholidini?
Ungenza kanjani ukuthi ikati lakho lingafuni ukuphuma endlini
Amakati (ikakhulukazi abesilisa noma ngabe a-neutered), angaba nesidingo sokuphuma ayohlola umhlaba. Yize uma ulandela izeluleko ezilandelayo, ungathola ukuthi ngokuzumayo, ikati lakho lizofuna ukuhlala ekhaya ngoba linakho konke elikudingayo.
Amakati ayizidalwa zomphakathi ezidinga ukukhuthazeka nokuxhumana, ngakho-ke uma unikela ngalokhu nsuku zonke, ngeke zisizwe isidingo sokuphumela ngaphandle ukuyokufuna. Chitha isikhathi sekhwalithi nesilwane sakho nsuku zonke, beka phambili lokhu kuhlu lwakho lokwenza nsuku zonke! Kunezimpawu ezithile ezingakutshela ukuthi ikati lakho linesizungu esikhulu:
Ulandela wena endlini futhi uhlala efuna ukunakwa
Chamela izinto zakho njengesibonakaliso sokuthi uyakuhlanya
Amakati, njengabantu, ayizidalwa ezijwayelekile. Kungakho badinga imikhuba empilweni yabo yansuku zonke nokuthi babe eceleni kwakho. Ukuvuka, isikhathi sokudla, njll. Bayalithanda ikhaya labo futhi uma inqubo yabo ishintsha kunoma yini, ikati lakho lingazizwa likhathazekile noma likhathazekile. Ukushintsha onkhe nokushiya ikati lakho lodwa isikhathi eside nakho kungaba yinto engemihle yokushintsha umkhuba futhi uthole indlela yokukushintsha lokho ukuphuma ngaphandle.
Mnike konke akudingayo
Mnike ukudlala, uthando, ubungane, imikhuba, ikati ohamba naye uma kungenzeka ... ikati lakho, uma lizizwa likhululeke ngokuphelele futhi likhuthazekile ekhaya lakho, ngeke lisizwe isidingo sokuphuma endlini. Ngaphezu kwalokho, ukumkhipha kungukubeka engcupheni yokuthile okubi okuzokwenzeka kuye, okufana nengozi, ukulwa phakathi kwamakati, ukugula, ukushayiswa yimoto, njll.
Chitha isikhathi sekhwalithi nekati lakho
Akufani ukuba segumbini, wena uhleli esihlalweni sekati kanye nekati lakho phansi, kunokuba nobabili nihlale esihlalweni noma phansi nihlanganyele. Kunabantu abacabanga ukuthi ikati aliludingi lolu hlobo lokunakwa, ukuthi luzimele kakhulu nokuthi ukujabula kwanele uqobo lwalo, kepha ukucabanga ukuthi lokho kuyiphutha.
Uma ungahlanganyeli naye, uma ungadlali naye futhi uma ungamniki uthando, ngeke silindele ukuthi afune ukuba nathi lapho sizizwa sinjalo. Ngakho-ke, uma sifuna ukuthi kube ikati elijabulayo, futhi lijabule, kufanele sichithe isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kufanele sazi ukuthi ngentambo elula noma ngebhola elincane thina naye singaba nesikhathi esihle.
Ukulala nekati? Yebo kungani kungenjalo? Uma ukhathazekile ngama-parasites, imitholampilo yezilwane nezitolo zezilwane zithengisa ama-antiparasitics azoqeda zombili izimuncagazi zangaphandle (imikhaza, amazenze, njll.) Nezangaphakathi (Earthworms). Uma kwenzeka unayo ukungezwani komzimba isilwane noma ukuthi uboya buyagula, ukhetho oluhle kakhulu kuzoba ukugwema ukungena embhedeni wakho, kepha kungenjalo ... ukulala nekati kuyizaba ezifanele zokuqinisa ubudlelwano.
Futhi ikati elichitha ubusuku nomuntu walo, linoboya obuzizwa buthandwa kakhulu. Ngakho-ke awudingi ukufuna uthando ngaphandle.
Inqobo nje uma singakwazi ukuyikhokhela, futhi inqobo nje uma sinekati lokuzijabulisa, kungathakazelisa ukumnika umngane wekati angadlala naye ngenkathi sihambile, futhi kungani ungasho kanjalo? Ukuze leyo ndlu ibe mnandi ngokuphindwe kabili. Mina ngokwami ​​ngihlala nama-feline ama-5 okuthi, yize benemvume yokuphumela ngaphandle njengoba sihlala endaweni ethule, baphuma isikhashana ekuseni nenye kancane ntambama, bese bachitha usuku lonke belele futhi ukudlala.
Omncane (uSasha, owazalwa ngo-2016, noBicho, ngo-2017) abaphumi nhlobo, futhi kuyintokozo ukubabona begijima. Lapho abantu abadala befika (uKeisha oneminyaka engu-7 ubudala, uBenji oneminyaka emihlanu, noSusty oneminyaka engu-5), benza njengomndeni osondelene; cishe. Iqiniso ukuthi uSusty ungaphezulu komgwaqo kunekhaya, futhi uzimele kakhulu. Kepha nabanye baba nesikhathi esimnandi.
Ngakho-ke, empeleni, uma ukwazi ukunakekela ikati lesibili futhi unentshisekelo ekukhuleni komndeni, unganqikazi. Vele, ukuze konke kuhambe kahle kusuka ngosuku lokuqala, ngincoma ukuthi ulandele izeluleko zethu.
Vikela ikati lakho
Uma singahlosile ukuvumela ikati ukuthi liphume endlini, kungaba ngoba sihlala edolobheni noma edolobheni elinabantu abaningi, noma ngoba sikhathazekile ngokuthi kukhona okungase kwenzeke kukho, kufanele senze konke okusemandleni ukuvimbela ukuthi lingahambi . Futhi kwenziwa kanjani lokho? Ukubeka inetha emafasiteleni esingakuthola ukuthengiswa ezitolo zemikhiqizo yezilwane, kokubili ngokomzimba naku-inthanethi. Lapha sikushiya neminikelo ethile ukuze ukwazi ukuyithola kalula:
lionto by dibea Red for ...
I-TRIXIE Avikelayo ...
I-PiuPet® - I-Cat Net ...
Ngokufanayo, kumele ube nomnyango wendlu uvaliwe njalo, ngoba ngokunganaki okuncane ubuka bungaphuma.
Ungashiya ikati lakho lide kangakanani?
Isizathu esisodwa sokuthi ikati lifune ukuphuma endlini yingoba lodwa futhi lidinga ukuba nokuhlangenwe nakho. Ngaphezu kokubheka iseluleko esikunikeze sona ngenhla ukuthi kuwumqondo omuhle ukuba nomngane wekati lekati lakho nokuthi bagcine inkampani eyodwa lapho ungekho, futhi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kufanele ushiye ikati lakho isikhathi esingakanani, uma kwenzeka ungeke ube nekati elingaphezu kwelilodwa nganoma yisiphi isizathu.
Yize kuliqiniso ukuthi amakati aziwa ngokuzimela kwawo, iqiniso ukuthi adinga inkampani nokuthandwa ngaso sonke isikhathi. Uma bechitha isikhathi eside bodwa ekhaya, bangaba nenjabulo baze bacindezeleke.… Futhi kuyisizathu esenza abanye babaleke noma bafune ukushiya amakhaya.
Empeleni akukho okwenzekayo ngoba ubashiya usuku olulodwa noma ezimbili bodwa uma benakekelwa izidingo zabo eziyisisekeloKepha isikhathi eside bangaba nesikhathi esinzima ngokomzwelo nokuningi uma bengenaye ozodlala naye. Ikati lakho akudingeki lishiywe lodwa isikhathi eside.
Uma uya eholidini akudingeki ushiye ikati lakho lodwa isikhathi eside ngoba noma likwazi ukufinyelela kudoti walo, amanzi nokudla, kunezinye izizathu ezingenza lifune ukushiya ikhaya lihlole umhlaba.
Yini okufanele uyenze uma uya eholidini?
Uma, ngokwesibonelo, ikati lakho linesifo esingelapheki futhi lidinga imishanguzo, okuhle ukusishiya ezandleni ezinhle, njengasesibhedlela sezilwane lapho bangasinakekela khona.
Omunye umqondo ukuthi uma uhlela ukuphuma endlini isikhathi eside futhi ikati lakho alinazo izifo ezingamahlalakhona, ungatshela abangane noma omakhelwane ukuthi bame ngasendlini yakho banakekele ikati lakho. Kuyindlela encane ecindezelayo yekati futhi enenzuzo enkulu kuwe. Ungakhokhela futhi nomthenjwa oqeqeshiwe wokuhlala kwezilwane ukuze anakekele ikati lakho ekhaya lakho ngenkathi ungekho.
Ngiyethemba ibilusizo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Ungalivimbela kanjani ikati lami ukuthi lingashiyi ikhaya
UGloribel Perez Hernandez kusho
Sanibonani, ngithathekile amakati futhi nginezimbili, encane enezinyanga ezintathu ubudala nengane eneminyaka emine futhi abayithandani, omncane unesikhwele esikhulu, akaboni ukuthi ngiyapha ukuthanda omkhulu, uthola ukumluma, futhi uma ngiba naleyo nkinga ukuthi uconsa kakhulu kepha kuphela lapho ngimbamba futhi bangilahle futhi lokho kubuhlungu lapho ngiphuthelwe eyodwa okuthi noma ngasikhathi sinye ngikhalela lapho ngimkhumbula, ngiyamthanda u-felines noma ngabe angenza izinhlekelele.
Phendula uGloribel Perez Hernandez
Lapho inezinyanga ezintathu izinyane lekati lifuna ukudlala, futhi ngenxa yalokhu liyabhibha futhi lihluphe umuntu omdala ngoba… liwumdlwane. Ngokuhamba kwesikhathi, ikati elidala lizokwazi ukumisa izinyawo zalo (noma kunalokho, izidladla zalo). Ungafundisa futhi hhayi ukuluma kakade ungaklwebhi ngokubekezela nokubekezela.
Sanibonani, nginekati (lowesilisa) elisanda kuqeda unyaka, kepha uyaphambuka kakhulu, umama waqala ukungamthandi kwazise ikati laligcwele izinwele kodwa ... ngolunye usuku ngamkhiphela ngaphandle ngibe sengimyeka alale laphaya Ikati laqala ukulijwayela kepha kwaba cishe izinsuku eziyi-15, ngabe sengimgeza njll njll futhi ngamngenisa futhi kodwa kwaqala kwaba nezinkinga eziningi, futhi ngiyamkhipha futhi .. .kodwa manje usejaha amakati ngimfaka ijezi lakhe ngenxa yamakhaza ngimshiyela i-cassia yakhe efudumele kakhulu noKUDLA futhi kukhona namakati afika azomkhumula amhlasele futhi lokho kubanga ukuthi balwe, kepha kusukela ikati lonakele kakhulu, alilwi futhi ngoba kwesinye isikhathi bayalimaza futhi futhi nekati ukuthi ngokungafuni ukukhulelwa uyalishaya ngaleso sikhathi ngoba lapho ngiqala ukubona lolo hlobo lokuphazamiseka ngaze ngatshela umama ukuthi bayamlimaza, ngakho-ke sithathe isinqumo sokuyigcina ebusuku (sinendawo yokuhlala engadini), futhi lapho waqala ukuzola kepha manje uMama wami uthathe isinqumo sokuyikhipha futhi namuhla kuzoba eyakhe yokuqalaukuphuma futhi kuyangethusa ukuyishiya lapho ngoba amakati noma ikati limshayile futhi iqiniso kunjalo, njengoba ekhohlakele kakhulu, akazi ukuthi angazivikela kanjani ngekhulu, ta, kahle ngiyesaba ukuthi udla okuthile noma kwenzeka okuthile kuye noma kunalokho akabuyi, ngenxa yalesi sizathu ngaya lapha, ngacabanga ukumthena kepha noma kunjalo umama akamfuni ngaphakathi noma efulethini, yini engingayenza?, ngicela uphendule ngokushesha.
Ukungamnaki kungaba yisixazululo. Kungavimbela izinkinga ezitholakala ekuziphatheni kokushisa (njengamanye amakati alwa nakho), futhi ngeshwa kunganciphisa nengozi yokuhamba kwesilwane.
Sawubona, nginoSiamese onezinyanga ezinhlanu ubudala futhi akanamakhaya kakhulu, kodwa anginayo indlu eyami yokuvala amafasitela futhi okusho ukuthi, enye indlela ukuze angahambi? okuthile okuzenzela njengekhambi?
Kunconywa ukumthatha ayothenwa, ngoba ngale ndlela ngeke abe nesifiso esikhulu noma adinge ukuba ngaphandle.
Ungafaka futhi inetha emafasiteleni, abiza okuncane kakhulu futhi angasindisa izimpilo.
UMargaret Valencia kusho
Sanibonani, nginekati elinezinyanga ezintathu ubudala nenja encane enonyaka owodwa ubudala, bayabekezelelana futhi kwesinye isikhathi bayadlala bayazi ukuthi bobabili bayingxenye yomuzi wami ... umbuzo wami ... ungaba umngane omuhle wekati lami noma futhi kungaba yinja?
Phendula uMargarita Valencia
Sawubona Margie noma Sawubona Margarite.
Lokho kuya ngekati ngalinye. Ngendlela efanayo esenza ngayo, akuwona wonke amakati afana nawo wonke amakati nezinja.
Manje, ngizokutshela nokuthi uma uzwana nenja, ukufaka ikati lesibili kungonakalisa yonke into.
Kwesinye isikhathi kungcono ukuthi ungazifaki engozini bese ushiya izinto zinjengoba zinjalo.
Ikati lami belingumuntu wasekhaya, lagula futhi kwadingeka ngilinike umuthi ngenkani, futhi ukusuka lapho laqala ukuba yinduka bese lidla kuphela, angazi ukuthi ngingalibuyisa kanjani futhi alibuyi ngifuna ukuhamba, ngicela ungisize
Kufanele usebenzise ngokunenzuzo isikhathi osichitha naye. Hlala eduze kwakhe, umphulule kamnandi ngenkathi edla (futhi izikhathi ezimbalwa kuphela, kuyinto ejwayelekile ukuthi angashiyi okungaphezu kwalokho), vula futhi uvale amehlo akhe kancane ngenkathi umbhekile (yile ndlela ozo mtshele ukuthi uyamthanda), Hlala noma ulale kusofa bese ummema ukuthi akhuphuke, adlale naye ngebhola noma ngentambo.
Ngokubekezela, ungaphinda uthole ukuzethemba kwabo.
Lapho amazinyane eqala ukuzikhulula
Ngenzenjani uma ngithola ikati emnyango wendlu yami?